FAQs - Xi'an Homey Teknolojia Co., Ltd
Tsy tantera-drano geosynthetics ara-nofo
Q1: Aiza ny orinasa hita?
A: Ny orinasa no misy ao Xi'an, Province Shaanxi, Sina.
Q2: Afaka manome ny santionany ho antsika?
A: Eny, maimaim-poana Afaka mandefa santionany, fa mila mandoa mpanjifa ny entana.
Q3: Inona no mba ambany indrindra dia be?
A: Ny mba ambany indrindra dia be dia 5000 Meter tora-droa, nefa negotiable.
Q4: Inona no teny fandoavam-bola?
Q5: Inona no fanaterana ny fotoana?
A: Matetika vidin'ny Production andro 3-5 andro, famokarana fahaizany: 5000-7000 metatra toradroa isan'andro.
RO rafitra fikarakarana ny rano
Inona no karazana loharano no hitondra?
Hanova Osmosis dia tsara ny rano vahaolana fitsaboana any amin'ny ankamaroan'ny karazana water.tap rano, fantatra amin'ny anarana hoe koa kaominina loharanom-baovao, undergroundwater, izay ahitana brackish rano, ary dranomasina. Ny lehibe indrindra amin'ireo telo samy hafa karazana dia ny Total levona Solids (TDS) afa-po ny tsirairay karazana. Toy ny fitsipi-ankihibe, ny American Health Association mitaky ny fisotro rano ambanin'ny 2000 PPM TDS.Reverse osmosis no matetika ampiasaina ao amin'ny paompy rano tontolo iainana mba hampihenana ny hamafin'ny, na ny potipoti-javatra avy napetraka ao amin'ny rano mandeha ao amin'ny fantsona vy. Total levona solids Matetika no lasibatry ny rano fanadiovana rano amin'ny paompy systems.Underground tahirin-drano dia matetika brackish, izay midika izy ireo boky lehibe mirakitra ny sira, nefa tsy ampy ny rano azo heverina ho sira. Ambanin'ny tany izany matetika dia voadio ho an'ny orinasa ny fambolena, ny harena ankibon'ny tany orinasa. Ambanin'ny tany ihany koa ny tian'ny lasibatry ny orinasa ny manakombona ireny, satria ny manam-paharoa tsikombakomba mineraly matetika manana tsiro mahafinaritra.
Salt rano mifanohitra osmosis (indraindray antsoina hoe desalination) dia ny fiverenana amin'ny dranomasina ho rano fisotro. Ocean rano hatramin'ny 45.000 PPM TDS. Ny fampiasana ny desalination lehibe indrindra avy amin'ny fanomezana rano ao amin'ny faritra izay tsy ho tapaka ny rano madio.
Pretreatment no ilaina?
Tena zava-dehibe izay homana ny rano ho preconditioned mba hiarovana ny fonontselan'ny tsy fouling miteraka aloha loatra failure.The manify dia naorina ny porous fitaovana izay mamela rano hamaky, fa mandà hatramin'ny 99% ny levona solids amin'ny ambonin'ny. Ny sira dia mifantoka levona mandà ny rano (renirano brine), izay dia afaka ny mandany. Manaisotra ny zavatra mialoha ny fanalahidin'ny mamela ny rafitra MG hanao izay dia natao do.As ny MG System manohy miasa, ny rava ary naato solids ao amin'ny fahana mazàna hanangona rano manamorona ny hoditra manify ambonin'ny. Raha ireo no navela solids hanangana, izy ireo tamin'ny farany mametra ny andalan-teny ny rano amin'ny alalan'ny fonontselan'ny, niteraka ny fahaverezan'ny throughput. (Ny fahafahana throughput ny fonontselan'ny dia matetika antsoina hoe ny tahan'ny marary mitsika, ary refesina amin'ny litatra isaky ny toradroa tongotry ny fonontselan'ny Velarantany isan'andro.)
Ilaina ny hahazo rano famakafakana?
Ny fanadihadiana amin'ny antsipirihany simika (LSI, SDI, na CFI) ny MG fahana ny rano dia tsy maintsy ho tanteraka hamantatra mety foulants. Tokony ahitana ny fandrefesana ny hamafin (kalsioma sy manezioma), baryum, strontium, alkalinity, pH, ary chlore. Ny tahirin-kevitra avy amin'ny fanadihadiana simika azo ampiasaina ny injeniera nanaovany ny rafitra mba hamantarana ny optimum
manify voaomana izay sady manamaivana ny fironana ny ambaratonga sy ny petra-bola fananganana sy faran'izay betsaka ny famerenana sy ny tahan'ny marary mitsika.
Inona marina no mamaritra ny pretreatments ho MG manokana?
Amin'ny teny iray: fanadihadiana. Loharano rehetra amin'ny rano dia tsy mitovy, ary tsy fantatrao izay ny eo amin'ny rano ianao mandra-nandinika izany. Famakafakana ny rano, LSI, SDI, na CFI toetra dia ampiasaina mba hamantarana ny marina pretreatment fepetra ho iray manokana MG System. Koa satria miovaova be ny rano ilaina amin'ny toerana iray hafa, pretreatment tsirairay fitakiana dia ho samy hafa.
Ve ny fahana ny rano tokony ho lasa malefaka ny MG?
Ion fifanakalozana dia malaza ho fanalefahana sy ny fomba fampihenana ny mety ho fananganana ambaratonga mineraly eo amin'ny hoditra manify ambonin'ny. Ion fifanakalozana fanalefahana mampiasa ny sodium hanolo scaleforming ions toy ny kalsioma, manezioma, baryum, strontium, vy, ary ny aliminioma mba tsy fahavoazana ho an'ny hoditra manify singa. Ny teny tena mety levona ny sodium sira, izay avy hatrany nolavin 'ny Reverse Osmosis System, ary tsy mora mamorona kirany mineraly eo amin'ny hoditra manify ambonin'ny. A sodiumcycle softener dia nateraka indray amin'ny klôro ny sodium brine. Ny nandany regenerant, miaraka amin'ny softener hosasany ny rano, dia tsy maintsy navoaka ny mandany. Izany dia noho izany izay Ion fifanakalozana no hirotsaka ho fampiharana izay manana votoatiny metaly ambony ao amin'ny rano tsaboina.
Tsy asidra tsindrona ilaina?
Misy asidra Toy ny vahaolana dia tsy tsara ho an'ny fonontselan'ny, caustic vahaolana Dia samy manimba ny hoditra manify zavatra. Tsindrona asidra azo nampidirina any an-MG pretreatment rafitra hifehy pH ary manamaivana ny kongonina-namorona fironana ny fahana rano. Asidra tsindrona no voalaza raha namorona ny kongonina fironana ny brine renirano any ambony +0,3 araka refesina ny LSI. Na sulfuric na hydrochloric asidra azo ampiasaina ho an'ny tanjona izany.
Inona no ho antiscalant atao?
Antiscalants efa hita fa nahomby eo amin'ny fanitarana ny eo anelanelan'ny simika cleanings ny MG fonontselan'ny. Ireo vokatra ireo amin'ny ankapobeny namoaka mba hampidirana inorganic phosphates, organophosphates, ary dispersants. Antiscalant sasany misy ratsy voampanga polymers sy dispersants izay afaka rehefa miaraka cationic polymers izay mety ho dosed hanoha riana mialohan 'ny haino aman-jery sivana. Ny Antiscalant Tsy maintsy mifanaraka amin'ny polymers ireo; raha tsy izany, ny fanehoan-kevitra dia nolotoin'ny vokatra ny fonontselan'ny.
Mitaky rafitra rehetra simika fanadiovana?
Na dia eo aza ny ezaka rehetra mba hiarovana ny rafitra tsy fouling sy very marary mitsika, amin'ny farany dia mitaky ny fonontselan'ny simika fanadiovana. A welldesigned RO rafitra dia ahitana andalana ho fanadiovana skid mba hanamorana ny dingana fanadiovana. Ny skid dia tokony ahitana ny simika tanky, vahaolana heater, recirculating paompy, fantsona ivoahan'ny, hoses, ary ny fifandraisana sy ny hafa rehetra ilaina Fittings fanatanterahana feno simika fanadiovana ny RO Modules.